Muxuu Ighalo ugu qanacsanyahay garoonka Old Trafford? | Hangool News
May 11, 2020 - Written by Hangool News 1
Odion Ighalo ayaa sheegay in uu rajeynayo in la kordhiyo heshiiska amaah ahaanta ee uu kula joogo kooxda Manchester United illaa iyo inta uu ka dhamaanayo horyaalka Ingiriiska.
Weeraryahanka reer Nayjeeriya ee 30 jirka ah, ayaa United uga soo biiray naadiga Shiinaha ka dhisan ee Shanghai Shenhua bishii Janaayo, iyadoo heshiiskiisu uu ku egyahay 31-ka May.
Masuuliyiinta horyaalka kubadda cagta Ingiriiska ayaa rajeynaya in horyaalku uu dib u bilowdo bisha June, iyadoo sidoo kale la filayo dib u bilaabashada horyaalka kubada cagta Shiinaha ,taasi oo keeni karta in Ighalo uu ku laabto Shanghai.
“Waxaan jeclahay in xilli ciyaareedku dhamaado, haddii ay suurtagal tahay” ayuu yiri Oghalo oo BBC-da la hadlayey.
“Si wanaagsan ayaan u ciyaarayey, goolal ayaan dhallinayey, haddana ma aynan ciyaarin in ka badan bil. Waan dadaalayaa, waxaana rajeynayaa inaan dib u soo laabano” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Ighalo.
“Kooxdu [Man United] waxay ku jirtay xilli aad u wanaagsan intii aanay bilaaban aafadu. Xilligan waxaan ku joogaa amaah, tanina waxay soo gaabin doontaa waqtiga aan kula joogo naadiga” ayuu mar kale yiri Ighalo.
BBC ayaa fahamsan in Manchester United ay aad u doonayso in ay kordhiso heshiiska amaahda kuu u joogo garoonka Old Trafford ciyaaryahanka caalamiga ah ee eer Nayjeeriya.
Ighalo ayaa 8 kulan oo uu u saftay Man United wuxuu dhaliyey afar gool dhammaan tartamada, goolashaas oo uu ka mid ahaa kii qaybta ka ahaa shantii gool iyo waxba ee United uga badisay kooxda LASK, kulankii qaybta ka ahaa wareega 16-ka ee tartanka Europa League ee dhacay 12-kii March, maalin ka hor intii aan lagu dhawaaqin in Premier League-ga la hakiyey.
Manchester United ayaa ku jirta kaalinta shanaad ee kala horreynta kooxaha, iyadoo ay u dhiman yihiin sagaal ciyaar.
Kooxaha Premier League-ga ayaa maalinta Isniinta ah yeelan doona kulan ay uga wadahadli doonaan dib u bilaabida xilli ciyaareedka.
Sababta Feeryahan Amir Khan u diiddan yahay in xilligan uu u feertamo.
Image captionAmir Khan
Amir Khan oo horey ugu guuleystey horyaalka feerka miisanka fudud ee adduunka ayaa sheegay inaanay qorshaha ugu jirin in uu ka qayb qaato tartan feer oo aanay garoonka ku sugneyn taageerayaal, haddii ay noqoto in dib loo bilaabo feerka inta lagu jiro aafada fayraska corona.
Feeryahanka reer Britain ayaa rajo ka qaba in dagaalka habeenkii uu dib u bilowdo bisha July, ayna daawadayaashu ka soo qayb gali karaan.
“Inkastoo lacag badan ay ku jirto, haddana awood uma lihi inaan ka qayb galo, maaddaamma aan doonayo taageerayaal inay halkaasi joogan” ayuu yiri Khan oo BBC-da qaybta cayaaraha la hadlayey.
“Saddex caruur ah ayaan leeyahay. Wax badan ayaan horey uga qayb qaatay cayaaraha, waxaana filayaa in 100% aan wax hubsado intii aan ku soo boodin” ayuu yiri Amir Khan.
33-jir Khan ayaa intaasi ku daray “Ma doonayo in cudur igu dhaco. Mustaqbal fog ayaan leeyahay. Ma waxaa doonayaa inaan qatar taasi galiyo, oo aan arko waxa dhacaya, dib ayaan uga waabanayaa waxoogaa si aan u dhawro sida ay xaaladdu noqonayso”.
Khan, ayaa tartankii Olypikada ee 2004 wuxuu ku guuleystay billad qalin ah, dagaalkiisii ugu dambeeyey ee feer ee ka dhacay Sacuudiga bishii July ee uga guuleystey Billy Dib ayuu ku gaaray guushiisii 34-aad ee ka gaaro 39 mar oo uu riingaha feerka dagaal uu u fuulay.
Guddiga maamula tartamada feerka ee Britain ayaa iminka wadaxaajood ka leh in feerku bilowdo bisha July, balse waxaa jiri doonaa tallaabooyin adag oo la qaadayo sida in daawadayaasha laga mamnuuco garoomada.